10 ထိရောက်သောအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခြေခံအဆက်အသွယ် Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 18, 2015 အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 15, 2020 Douglas Karr
Wrike သင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိအကြောင်းအရာများထုတ်လုပ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အသုံးပြုသောပူးပေါင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအကြောင်းအရာအင်ဂျင်အဖြစ်ရည်ညွှန်းပြီးအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုကိုပိုမိုထိရောက်စေသည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်စင်မြင့်မှနှစ် ဦး စလုံးကိုဖော်ပြသည်။
Content Engine ဆိုတာဘာလဲ?
content engine ဆိုသည်မှာဘလော့ဂ်အကြောင်းအရာ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ebooks, infographics, ဗီဒီယိုများနှင့်ဆလိုက်များအပါအဝင်အရည်အသွေးအမျိုးမျိုး၊ မီဒီယာအမျိုးမျိုးတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးပစ်မှတ်ထားပြီးတသမတ်တည်းပါဝင်သောလူများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကိရိယာများဖြစ်သည်။
အလုပ်အမှုဆောင် Buy-in - အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်၏သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုသည်အရင်းအမြစ်များလိုအပ်သောကြောင့်သင်၏အမှုဆောင်အရာရှိများထံမှရေရှည်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။
ဗျူဟာမြောက်အခြေအနေ - ပစ်မှတ်ရှိပရိသတ်၏အခန်းကဏ္, များ၊ နာကျင်မှုအချက်များ၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများနှင့်ဆန္ဒများကိုထည့်သွင်းထားသည့်အစီအစဉ်တစ်ခု။
အကြောင်းအရာဗဟို - ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောအကြောင်းအရာများကိုသင်၏ပရိသတ်ကြည့်ရှုနိုင်မည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာမှမြှင့်တင်နိုင်သည်ကိုဗဟိုအရင်းအမြစ်များ။
အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများ - ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုရေးသား၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ မြင်ယောင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။
ဒီဇိုင်နာများ & အကြောင်းအရာပညာရှင် - ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ၊ ဗွီဒီယိုအယ်ဒီတာများ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ebook အထူးကုများကိုပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုယူဆောင်။ အနုပညာသို့ပြောင်းလဲစေသော။
လူမှုမီဒီယာ, ကြော်ငြာခြင်း, SEO နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Authomation ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း - ကြီးကျယ်သောအကြောင်းအရာများကိုပြုလုပ်ရန်မလုံလောက်ပါ၊ ၎င်းကိုမြှင့်တင်ရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်ဗျူဟာကျသောလုပ်ဆောင်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။
လုပ်ငန်းအသွားအလာ, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု & ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု Tool ကို - လိုမျိုးထုတ်လုပ်မှုကိရိယာ Wrike အလုပ်များ၊ အချိန်ဇယားများနှင့်ခွင့်ပြုချက်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊
အယ်ဒီတာ့အာဘော်ပြက္ခဒိန် - သင်၏အကြောင်းအရာအစီအစဉ်အတွက်ရေတိုနှင့်ရေရှည်အကြောင်းအရာများကိုစီစဉ်ရန်နှင့်ပြသရန်စွမ်းရည်။
Voice & Brand လမ်းညွှန်များ - ထုတ်လုပ်ပြီးပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများတသမတ်တည်းရှိစေရန်သင်၏ဖန်တီးသူများနှင့်အထူးကုများအလွယ်တကူကူးယူနိုင်ခြင်းနှင့်စာတိုပို့ခြင်းလမ်းညွှန်များ။
analytics - အကြောင်းအရာတစ်ခုစီ၊ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီ၊ အဖွဲ့တစ်ခုစီနှင့်အစီအစဉ်တစ်ခုစီအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခြေရာခံရန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခု။
အဆိုပါ Wrike platform, Salesforce, Zapier, Okta, Bitium, Google Apps, Gmail, Apple Mail, Outlook တို့နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင် Android နှင့် iOS မိုဘိုင်း application များရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာမူတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်လင့်ခ်ကိုအသုံးပြုသည် Wrike စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုများအတွက်!
Tags: android app ကိုပန်းသီးစာbitiumအကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်အကြောင်းအရာအင်ဂျင်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုGmail ကိုဂူဂဲလ်အက်ပ်များios appအိုကေသဘောတားရောင်းသူWrikezapier